Ciyaaryahankii hore ee England Karen Carney ayaa tirtirtay barteeda Twitter-ka kadib markii ay aflagaadeeyeen kooxda Premier League ka dhisan ee Leeds United.
Carney wuxuu ahaa nin ka faallooda barnaamijka Amazon Prime ee Leeds 5-0 kaga badisay West Brom usbuucii la soo dhaafay, iyadoo falanqeyntiisa ay ka hor timid kooxda weyn ee Leeds United.
Carney ayaa soo jeediyay in sababta Leeds loogu dallacsiiyay Premier League ay sabab u tahay Virus-ka Korona, oo runta ka fog maadaama Leeds ay la dhacday qeybta labaad xilli ciyaareedkii hore ka hor inta uusan Korona Fayras bilaabin.
Dad badan ayaa ku dhaleeceeyay haweeneyda inay qaddarinayso shaqada adag ee ciyaartoyda Leeds iyo maamulahooda Biesla.
Laakiin kooxda ayaa jawaab ka bixisay dhamaadka ciyaarta iyagoo bartiisa Twitter-ka soo dhigay:
Sababtoo ah Fayraska ‘Corona Virus’, ayay soo galeen. ” Waxaan ku guuleysanay horyaalka 10 dhibcood. Salaama Prime Video Sport. ”
Jawaabta kooxda ayaa albaabka u furtay in taageerayaasha kooxda ay fariimo anshax xumo ah u diraan gabadha, taasoo hada keentay in 33 jirkaan uu ka tago akoonkiisa uu ku leeyahay baraha bulshada uuna tirtiro akoonkiisa oo ay ku jiraan 78,000 oo qof.
Markii uu soo baxay warka ah in Carney ay tirtirtay koonteeda, taageere ayaa qoray: “Waxaan rajeynayaa inaad ku faraxsan tahay Leeds United, waxaad u furtay albaabka kadeedka galmada ee iyada ka dhanka ah waxaanan rajeynayaa inaad ku faraxsan tahay inaad ka jawaabtay.”
Isla waqtigaas, weriye Max Rushden ayaa qoray: “Waxay u egtahay in Karen Carney ay tirtirtay akoonkeeda Twitter. Maxay ceeb ku tahay qof inuu ka tago barta xiriirka bulshada.
“Naxariista dhaha meeshan ma badaleyso laakiin fadlan.”
Maqnaanshaha Manchester United